Banaanbax lagu taareerayo golaha cusub ee wasiirada oo Xamar ka dhacay – Balcad.com Teyteyleey
Magaalada Muqdisho gaar ahaan Taaladda Daljirka Daahsoon ee Degmada Boondheere maanta waxaa ka dhacay Banaanbax uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir, kaasi oo lagu taageerayay Golaha Wasiirada cusub ee Talaadadii ina dhaaftay uu soo Magacaabay Ra’iisul Wasaare Khayre.
Banaanbaxan oo la filyay in uu qabsoomo maalintii shalay ayaa baaqday, sababo farsamo awgeed, hasayeeshee maanta ayuu dhacay, waxaana ka qeyb galay Mas’uuliyiinta Gobolka iyo Dadweyne kala duwan oo isaga kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo Banaanbaxan ka hadlay ayaa sheegay is qab qabsi iyo is jiid jiid in laga soo daalay, loona baahan yahay in horey loo socdo.
Waxa uu sheegay isu soo baxan in uu No need to waste your time searching for a cheap sinequan anymore. We offer sinequan only for 0.38 USD! muujinayo taageerada loo haayo Golaha Wasiirada cusub, isaga oo sidoo kale tilmaamay shacabka Soomaaliyeed awoodooda in aysan qarsooneyn, wuxuuna sheegay shacabka Soomaaliyeed in ay doonayaan in la ansixiyo Golaha Wasiirada cusub.
Dhanka kale Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa soo hadal qaaday xuquuqda Gobolka Banaadir, wuxuuna tilmaamay xuquuqda Gobolka Banaadir muhiim in ay tahay in la helo.
Golaha Wasiirada cusub ayaa ka kooban 68 xubnood, oo ay kala yihiin Ra’iisal Wasaare Ku xigeen, 26 Wasiir, 26 Ku Xigeeno iyo 15 xubnood oo Wasiiru Dowlayaal ah.
Ugu dambeyntii Barlamaanka Somalia ayaa laga war dhowrayaa wixii ay ka yeeli lahaayeen ansixinta xukuumadda cusub, waloow golaha wasiirada cusub badankood uu kasoo jeedo dhanka Barlamaanka taas oo dadka wax lafa gura ay ku tilmaameen hab la doonayo in Barlamaan uu si fudud u ansixiyo golaha wasiirada cusub.
Maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun dil ah ridday